Semalt: Indlela Eyona Ntle Yokumisa Izikhangiso Ze-Pop-Up
iGoogle yenza umsebenzi omkhulu wokugcina iiwindow eziphambili ezilawulwayo. Yingakho ulwandle lwamafestile olusasazekayo oluchaphazela amava ethu okugqatso lubonisa ezinye iingxaki ezinkulu. Ngombulelo, kukho iindlela ezininzi zokujongana nalezi zikhangiso ezicasulayo nezikrakrayo. Ukukrazula i-pop-up engafunekiyo kwaye engaqondakaliyo kunye nesibhengezo sesibhengezo yinkqubo yeendlela ezimbini. Okokuqala, kufuneka ususe nayiphi na i-adware okanye i-malware kumatshini wakho. Okwesibini, kufuneka usebenzise ulwandiso lweebrowser ukuvimba ukupapashwa kwezaziso kunye nezibhengezo zebhanki. Ezinye izinto omele uzikhumbule zikhankanywe ngezantsi.
Ukucoca iifestile zakho:
uLis Mitchell, u-14 (Semalt oyingcali, uchaza ukuba xa uqhuba inkqubo ye-AVG yokulwa nentsholongwane kwaye uyekile ukusebenza ngokufanelekileyo, kufuneka ufune enye i-adware okanye i-anti-malware. Uninzi lweengcali zincoma i-Malwarebytes Anti-Malware, elungileyo ukulwa ne-malware kunye nokususa iintengiso ezidangayo kwi-system yakho. Enye inkqubo efanayo ungazama ngazo zombini iWindows 7 kunye ne-Windows 8 yi-Xplode's AdwCleaner, ejolise kuzo zonke iibar yomnxeba, abahlaseli be-browser, kunye ne-adware eyenza ukuvelisa kwinani elikhulu. Kukho ingxelo engekho engekho mthethweni ye-AdWCleaner eya kucela ukuba uyihlawule into yokususa i-pop-ups kunye ne-adware. Akufanele ukhethe oko kwaye ukhuphela kuphela inguqu yangempela yale sixhobo..
Ukujonga izandiso kunye nezongezo kwi-Windows 7 kunye ne-Windows 8, kufuneka uqakraze kwi icon kwicala eliphezulu kwaye nqakraza ukhetho lwe-Add-ons kwimenyu yokuhla kwayo. Zonke ii-add-onsineefayile ezihlukeneyo zokukhubaza, ukuSusa kunye neenketho. Umele uqakraze kwiQinisekisa lokukhubaza kwaye unqande i-malware kunye neentengiso ezikhuphayo ekuboniseni kwinkqubo yakho yokusebenza. Enye indlela yokunciphisa inani le-ads-pop-up kwi-Windows 7 ne-Windows 8 ngokufaka i-software ye-Ublock Origin. Inkqubo iye yenziwa nguRaymond Hill kwaye ingadla i-malware ehlukeneyo kunye ne-adware ebangela ukuphuma kwe-pop-ups. Kuza kunye nezihlunu ezinjenge-EasyPrivacy ne-EasyList. Unokukhetha kwakhona i-Ghostery, eyona nto iyona nto inqabileyo kwaye inqabileyo ukukhusela iintengiso ezipapa. Ingavimbela iintengiso ze-Facebook, i-DoubleClick izikhangiso kunye nezikhangiso ze-Google Translate.
Ii-pop-ups zihlasela iiwebhsayithi kunye neenkqubo zokusebenza ozisebenzisayo ukukhuthaza iimveliso ezininzi kwi-intanethi kwaye wenze imali. Kubizwa ngokuba yi-foistware, equka iiplatifomu ezifana ne-Google, iMicrosoft Bing, Ask, i-PUP kunye ne-Google Chrome. Isisombululo esilula kukuba ufake inkqubo eyaziwa ngokuba yi-Unchecky. Ivale okanye iphelise iimfumba zonikezelo ezibonakala zichanekileyo kwaye zivela ngendlela yokupasa.
Yeka ukuphuculwa kwe-Windows 10:
iMicrosoft izama ukufumana inkqubo entsha ye-Windows 10 kwiinkqubo ezininzi kwaye ifake i-GWX encinci (Fumana i-Windows 10) usetyenziso kwi-Windows 7 kunye ne-Windows 8. Icela ukuba uphucule ngokukhululekileyo, okungafanelekanga. Sincoma ukuba u-GWX Control Panel Ultimate Outsider ukuba ufuna ukuvimbela izaziso zeMicrosoft zokukhupha kunye neziphulo ezivuthayo. Ngaphandle koko, unokuzama u-Ed Bott wesikhangiso se-ad kwaye ulahlekise ezo zipapa kunye nezikhangiso zebhanki ezenza umonakalo kuwe kwi-intanethi Source .